Dursaan garee IS Abu Bakar al - Bagdaadii akkamiin ajjeefame? - BBC News Afaan Oromoo
Dursaan garee IS Abu Bakar al - Bagdaadii akkamiin ajjeefame?
29 Onkololeessa 2019
Dursaan garee warra IS kan turan Abu Bakar al -Bagdaadii humni addaa Ameerikaa isa marsuu isaarraan kan ka'een boombii hidhatee ture ofirratti dhoosuudhaan akka lubbuun isaa darbe Pirezedaantiin Ameerikaa doonaald Tiraamp beeksiseera.
Ofii bakka Abu Bakar al - Bagdaadiin jiru akkamiin baramee?
Sabaa himaaleen Ameerikaa madda odeeffannoo osoo hin eeriiin akka gabaasanitti, mooraa Abu Bakar al - Bagdaadiin keessa dhokatan Sooriyaa keessatti argama.
Bakki kunis daangaa Kibba Turkii irraa ammoo kiiloomeetira shan fagaatee kutaa bulchiinsa Idiiliib keessatti ganda argamtu Baariishaa jedhamtudha.
Bakka manni al - Bagdaadiin keessatti argaman kun baatii muraasa dura odeeffannoo namoonni walitti fufinsaan kennaniin hordofamee akka ta'es gabaafameera.
Barruleen Niwuuswiik jedhamu aanga'aa Ameerikaa tokko eeruun akka gabaaseetti haadhotii warraa al - Bagdaadii keessaa tokkoofi hojjettuun manaa isaa tokko Ganna darbe to'annoo jala oolfamanii turan.
Haleellaa garee IS irratti raawwatameen hoogganaan garichaa ajjeefameera jedhan Tiraamp
Yeroo dursaan IS, al - Baagidaadiin ajjeefamu namoonni lamammoo to'ataman
IS viidiyoo 'du'a loltoota US' Niijariitti gadi dhiise
Waashingiteen Post ammoo namni IS irraa ar'iameefi warra Kurdootaatiif madda odeeffannoo murteessaa kan ta'e tokko odeeffannoo kana akka kennee gabaaseera.
Ameerikaa waliin michooma kan qabuufi Ajajaan Humnoota Dimokiraasii Sooriyaa Kurdootaam durfamuu Maaziloom Abdii ammoo ji'oota hedduudhaaf odeeffannoo kana walitti qabataa akka tureefi, "ergama guddaa kana" keessatti warra hirmaatan hundaaf ergaa tiwiiteraatiin dhiyeessuu isaanii ibsaniiru.
Idiliib naannoo leellistoonni warra IS waliin warra walmorkatan to'atan ta'ee osoo jiruu Dursaan garee IS Abu Bakar al - Bagdaadii achi keessa dhokachuun namoota hedduu kan ajaa'ibedha.
Loltoonni IS dhibbaan lakkaa'aman biroon bakka sana keessa socho'aa jiru.
Kamisa darbe Pirezedaant Tiraamp haleellaa Abu Bakar al - Bagdaadiirratti raawwatamuuf hayyama erga kennaniin booda aanga'oota Waayita Hausii waliin kutaa 'Sichuweeshiin Ruum' jedhamu keessatti argamanii turan.
Abu Bakar al - Bagdaadii akkamiin ajjeefaman?
Turkii, Iraaq, humnoota warra Kurdootaafi naannoo qillensaa Idiliibii kan to'ataa jirtu Raashiyaa dabalatee michoonni Ameerikaa naannoo sanatti argaman waa'ee dhimma kanaa dursanii akka quba qabaatan godhamee ture.
Garee loltootaa kamiitu akka haleellaa kana raawwate ifa godhamuu baatus, aanga'oonni Ameerikaa sabaa himaaleetiif odeeffannoo akka kennanitti, humna addaa 'Deltaa Foors' jedhamu akka ergama kanarratti hirmaate ibseera.
Gareen kunis muuxannoo bal'aa akka qabus dubbatameera.
Loltoonni 100 hin caalle ergama kana keessattis qooda fudhachuun akka hin oolles ibsameera.
Xiyaaronni waraanaa hedduun akka hojiirra oolan yoo ta'u helekoopteroonni saddet loltoota gara bakka sanaa geesuudhaafis tajaajilaniiru.
Iraaqirraa ka'anii bakka sana ga'uudhaafis helekoopteraa saatii tokkoofi daqiiqaa kudhan fudhateera jedhameera.
Yeroo loltoonni sun bakka sana ga'anitti, loltoota Abu Bakar al - Bagdaadiidha warri jedhaman battalumaan rasaasaa xaaxessuun naannoo sana miila tokkoon yeroo dhaaban kan loltoonni Ameerikaa itti deeman sunis deebii kennaniiru.
Namni ganda Baarishaa keessa jiraatu tokko akka ibsetti, helekoopteroonni kunneen manneen naannoo sana turan lama irratti misaayela dhukkaasuun barbadeesseera.
Loltoonne erga helekooptera irraa bu'anii Abu Bakar al - Bagdaadiin akka harka isaa kennatuuf ajaja dabarsanii turan.
Haata'u malee, mana sana keessaa kan ba'an namoota lamaafi ijoollee 11 turan. Abu Bakar al - Bagdaadiin karaa holqa duraan qotamee qophaa'ee tokkoo miliquudhaaf yaalee ture.
Itti aansuudhaan loltoonni kunneen holqawwan kana keessa boombiin duraan kiyyeeffameeru jiraachuu mala jechuudhaan boollawwaniifi holqawwan jiran boombiidhaan dhodhoosaniiru.
Loltoota kana jalaa miliquurra kan ture Abu Bakar al - Bagdaadiin boombiin inni qaama isaarratti hidhatee ture dho'uu isaarraa kan ka'e ofii isaa dabalatee ijoollee qabatee ture sadii waliin balleesseera.
Loltoonni kunneen sakkatta'insa taasisaniin dabalataan ijoollee kudhanii ol ta'an bakka sanaa baasaniiru.
Tiraamp ammoo daa'imman kunneen gara warra isaan kunuunsuu naannoo sanatti argamuutti geeffamaniiru jedheera.
Akka suuraawwan bakka haleellaan kun itti raawwaterraa bahan agarsiisanitti, gamoowwan diigamaniiru, konkolaataawwan gubatan bakka gara garaatti ni argamu, qaawwa rasaasni uuma girgiddaawwaniifi keenyan irrattis baayyinaan ni mul'atu.
Haadholii warraa al - Baagdaadii
Haadha warraa al- Baagdaadiiti kan jedhaman dubartoonni lama ajjeefamaniiru.
Qaama isaanii irratti fanjii dhuka'utu jira ta'a jedhamee waan tilmaamameefi fashalsuuf yaaluun balaa qaba jedhamee waan yaadamef loltoonni reeffa isaanii dhiisanii deemaniiru.
Dubartoonni maaliif meeshaa shororkessummaa ta'u?
Waayit Haawus akka beeksisetti loltoonni IS shan dallaa keessatti kan ajjeefaman yoo ta'u kaanis dallaan ala ajjeefamaniiru.
Loltoonni Ameerikaa lamas miidhaan kan irra gahe yoo ta'u miidhaan kuni salphaa waan ta'ef gara ergama isaaniitti deebi'aniiru jedhameera.
Holqa al- Baagdaadiin keessatti miliquu barbaade keessatti sareen tokko faana waan bu'ef miidhaan cimaa irra gahus ergama erga fixan booda loltoota waliin deebi'uun isaa ibsameera.
Ameerikaan al- Baagdaadiin ajjeefamu isaa akkamin mirkaneeffate
Gaafa Sambataa al-Baagdaadiin miliquuf yeroo yaalu loltoonni Ameerikaa ijaan akka isa arganiifi du'uu isaa mirkaneessuu isaanii ragaaleen Ameerikaa irraa dhagahaman ni mirkaneessu.
Komaandarri ergama kana hogganaa turan ergamni kuni milkaa'uu isaa ibsuuf kooddii 'jaakpoot' dhageessisaniiru jedhameera.
Pirezidant Tiraamp akka ibsanitti qacceen sanyii reeffa al-Baagdaadii irraa fudhatame isa ta'u mirkanesseera jedhameera.
Loltuu Siwiiz garee IS waan loleef himatame
Qorannoon kan taasifame ekispartoota loltoota waliin deemaniin yoo ta'u yeroo achi dhaqanis qaccee sanyii kan al - Baagdaadii of biraa qaban waliin walbira qabuun isa ta'u mirkaneessaniiru.
Dabalataanis, reeffi al - Baagdaadii kan miidhamarraa hafe helikoftaraan akka fudhatamu ta'eera.
Gorsaan nageenyaa Ameerikaa Roobart Abiraayen akka jedhanitti reeffa al - Baagdaadii hafe garbatti naqu.
Hogganaan Al - Qaayidaa bara 2011 erga ajjeefamee booda reeffi gara gabra keessatti gatamee ture.
Qe'ee al - Baagdaadiin ajjeefame
Qe'een al - Baagdaadiin itti ajjeefame Baarishaa jedhama. Daangaa Sooriyaafi Iraaq irraa 100km fagaatee kan argamu yoo ta'u bakkicha maaliif akka filate tilmaamuun salphaadha jedhaniiru Pirezidant Tiraamp.
Israa'eel gabbisa Nikuleeraa Sooriyaa haleeluu amante
''Al- Baagdaadiin gara Idliib kan deeme humnoonni waraanaa Kuurd Baha Sooriyaa ganda Baaguz jedhamu garee IS jalaa waan baasanif bakkasitti loltoota IS qindeessuuf ture.
Pirezidantichi dabalanis bakka rakkoon kuni dhalatetti wantoota fuulduratti yaade hedduu argachuu isaanii ibsaniiru.
''Eenyuyyuu haa ta'u gara aangootti yoo yaade isa hin dhiifnuun. Eenyu isa bakka bu'u akka danda'us ni beekna. Sirriitti isaan hordofaa jirra.'' te?
28 Onkololeessa 2019
Ajjeechaa Abu Bakar al - Bagdaadii: Waraanni Ameerikaa namoonni lama hidhamuu beeksise
Viidiyoo IS 'yeroo loltoonni US Niijar keesatti dhoksaan haleelaman agarsiisa'
5 Bitooteessa 2018
Dubartoonni maaliif meeshaa iccitii shororkessummaa ta'u?
23 Ebla 2019
Israa'eel Sooriyaatti bakka gabbisa nikuleeraati jechuun shakkite haleeluu ishee amante
21 Bitooteessa 2018
Loltuun duraanii Siwizerlaand garee IS deemee loluusaatiif himatame
22 Guraandhala 2019
'Ajjeechaan murtee seeraa malee Dambidollootti raawwatame yaadeesssaadha'
Lolli Israa’el-Palestaayiin cimaa jiru waraana hamaatti ce’a jedhamee sodaatamaa jira
Sa'aatii tokko dura
Ajjeechaan dargaggoo Amaanu'eel miidiyaa hawaasaa gubbaatti dheekkamsa kaase
12 Caamsaa 2021
'Bara 2013 keessa qofa Shaneen poolisoota 112 ajjeeseera' - Abbaa Alangaa Waliigalaa
11 Caamsaa 2021
Loltoonni Itoophiyaa miseensa nagaa eegdota UN turan 120 kolu-galtummaa gaafatan
10 Caamsaa 2021
‘Mirga Ajjeesuu’- Namoota abbaasaa gara jabinaan ajjeesaniif ilma dhiifama godheen kitaaba barraa'e
9 Caamsaa 2021
'Tarkaanfiin seera kabachiisuu Oromiyaa keessaa karaa seera hordofeen ta'uu qaba'
6 Caamsaa 2021
Rookkeetii Chaayinaa to'annoon ala bahee ture ‘garba Indiyaaniirratti kufe’
Ajjeechaa Art. Haacaaluurraa 'bilisa' jedhamtee kan turte Aamrot Kamaal dhaddachatti dhiyaatte
7 Caamsaa 2021
'Gareedhaan yaalii reebichaa narratti taasifame' - Lij Yaareed
Paarlaamaan Itoophiyaa 'Shanee' fi TPLF shororkeessitoota jechuun labse
Hooggansarraa kaafamuun Dr. Taaddasaa Qana'aa maaliif dubbii ijoo ta'e?
Maanguddoo ofiin osoo hin baratiin yunivarsitii barsiisan – Ahimad Hasan
Israa’el magaalaa Lood keessatti labsii yeroo muddamaa labsite
Kondomii mudaa hin qabne hojjechuuf adeemsi jalqabame
Qonnaan bultoonni Tigraay 'akka hin qotanne dhorkamaa jiru'
Namicha sagantaarratti 'na affeeruu diddan' jedhe namoota jaha ajjeese